Naqshad Cabbiraad ah sida loo hirgeliyo macluumaadka looga baahan yahay Websaytka HTML
Xog badan oo lagu soo bandhigay shabakada waxaa loo tixgeliyaa "aan habooneyn" sababtoo ah si habboon looma qaban qaabin. Websaydhyada HTML way ka duwan yihiin habka ay ku jiraan dukumintiyada habaysan, iyo qoraalka lagu soo bandhigay dukumiintiyada waxaa loo qaabeeyey gudahood HTML code.
Waxaa jira saddex siyaabood oo laga soo saaro xogta shabakadaha internetka:
Qoraalka qoraalka ku jira bogga internetka ee kombiyuutarkaaga;
Qoritaanka koodhka saaridda xogta;
Isticmaalida qalab wax soo saar oo gaar ah;
1. Sidee looga soo saari karaa HTML bogga internetka adiga oo aan codsanayn
Adiga waxaad ku xoqin kartaa bogga internetka ee la adeegsanayo talaabooyinka hoos ku xusan:
Ka dib markaad furanayso boggaga oo ku jira qoraalka aad rabto, guji midig oo dooro "Save Page As," ama "Save As". Ku qor magaca feylka ee "File Name" oo ka socda "Save As Type" drop-down menu, dooro "Bogga Bogga, HTML kaliya. "Riix badhanka" Badbaadinta "badhanka sugana dhawr ilbiriqsi.
Dhammaan qoraalka ku yaala bogga waa la soo saaraa oo lagu kaydiyaa faylka HTML. Fursadaha bogga asalka ah ee asalka ah waa kuwo isdhaafsan, waxaadna ku dari kartaa waxyaabaha ku jira qorayaasha sida qoraalka ah sida Notepad.
Ka saarida bogga oo dhan
Dooro "Dareem ahaan" ama "Save Page as" ee ku jira "File" menu. Kadib, riix "Bogga Bogga, Dhammeystiran" laga soo "key as Type". Kadib guji "Kayd," qoraalka iyo sawirrada ayaa laga soo saari doonaa bogga waxana lagu keydiyay meel kasta oo aad rabto. Qoraalka waxaa lagu dhejiyaa faylka HTML marka sawirada lagu kaydiyo fayl.
2. Soo saar HTML oo laga helo bogga adoo isticmaalaya codeyn
Waxaad si toos ah uga shaqayn kartaa faylasha HTML iyadoo la isticmaalayo qalab gaar ah. Sidoo kale, waxaad abuuri kartaa code si aad uhesho dhammaan tagsyada HTML iyo keydinta qoraalka ku jira faylka HTML iyadoo la isticmaalayo XPath ama muujin joogto ah. Qaar ka mid ah luqadaha barnaamijka ugu caansan ee hawshan waxaa ka mid ah Python, Java, JS, Go, PHP iyo NodeJs.
3. Isticmaalida qalabka feylasha xogta webka
Haddii aad rabto inaad faylasha HTML ka soo saarto websayd la'aan adoo qoraya hal xarig oo keli ah ama ka hortagaya jirdilka ee nuqulkii nuqulkii iyo habkii, isticmaal . Dhab ahaantii, waxaa jira qalab badan oo waxtar leh oo soo ururin kara macluumaadka lagama maarmaanka ah ee shabakad ka dibna u beddel qaabka qaabaysan. Waxaad isku daydaa in yar oo qalabka wax burburiya s, waxaadna hubaal ka heli doontaa midka ugu haboon ee baahiyahaaga wax burburiya Source .